ग्वाडालुपे को भर्जिन को लागी प्रार्थना। ? संरक्षण, Amparo र चमत्कार
भर्जिनलाई प्रार्थना गर्नुहोस् ग्वाडालुपेबाट विश्वास र हृदयबाट नम्रताको कार्यमा उचाल्नु जुन मानव हृदयले आत्मिक प्राणीहरूबाट सहयोग माग्नु पर्ने संवेदनशीलता प्रकट गर्दछ।
यस समयमा कुनै पनि समय हामी बाँचिरहेको छैन, प्रार्थनाहरू खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूद्वारा उठाइन्छन्।
त्यहाँ असम्भव केहि छैन जब हामी प्रार्थना को एक उपकरण को रूप मा लड़ाई लड्न को लागी एक उपकरण को रूप मा लाग्छ कि जाँदै छ दिन को दिन हामीलाई प्रस्तुत।
हामी आफूलाई चाहिएको कुराको लागि पनि सोध्न सक्छौं र ती चीजहरू जुन हाम्रो सपना र चाहनाहरू भएका छन् र ती अझै पनि हाम्रो आत्मामा सुरक्षित छन् र हामीलाई थाहा छैन।
1 गुवादालुपको भर्जिनलाई प्रार्थना ग्वाडलुपेको भर्जिन को हो?
1.1 सुरक्षाको लागि ग्वाडलूपीको भर्जिनको प्रार्थना
1.2 ग्वाडलूपको भर्जिनको लागि सुरक्षा अनुरोध गर्न प्रार्थना
1.3 चमत्कारको लागि सोध्न गुआडालूपीको कुमारी प्रार्थना
2 के म सबै प्रार्थनाहरु भन्न सक्छु?
ग्वाडालुपेको भर्जिनलाई प्रार्थना ग्वाडालुपेको कुमारी को हो?
यो मेक्सिकोमा १1531१ मा भर्जिन मेरीको उपस्थिति हो।
यो ज्ञात छ कि उनलाई पहिलो भेट्ने भारतीय जुआन डिएगो थिए जब कि द्रव्यमानको लागि जाँदै थिए।
यसले कथा बताउँदछ कि कुमारीले उनलाई एउटा मन्दिर निर्माण गर्न र बिशपको साथ शुरू हुने सम्भावित सबै मानिसहरूलाई सन्देश दिन अनुरोध गरे।
भारतीय जुआन डिएगोले त्यसो गरे, उनलाई सौंपाए जस्तै, यो सजिलो थिएन किनकि कसैले पनि उनलाई विश्वास गरेन किनकि हरेक आश्चर्यकर्म जस्ता, ती संकेतले पनि भारतीयले भनेको कुरा साँचो थियो भनेर देख्नु आवश्यक पर्‍यो।
storia कि कुमारीले उनलाई एउटा मन्दिर निर्माण गर्न भने सबै व्यक्तिलाई सन्देश पठाउनुहोस् बिशपको साथ सुरू सम्भव छ।
भारतीय जुआन डिएगोले त्यसो गरे, सबै जसो उनलाई सुम्पिएको थियो, यो सजिलो थिएन किनकि कसैले पनि उनलाई विश्वास गरेन किनकि हरेक आश्चर्यकर्म जस्ता केही संकेतहरू पनि देखिन आवश्यक छ कि भारतीयले भनेको कुरा सत्य थियो।
भारतीयले भर्जिनबाट एक नयाँ निर्देशन प्राप्त गर्दछ जहाँ उसलाई पहाडको टुप्पोमा रहेको गुलाबहरू खोज्न सुम्पिएको छ, उसले फेरि एकपल्ट आदेश पालन गर्दछ र ताजा गुलाबको खोजी गर्दछ बिशपलाई कम्बलमा लपेटेर, जब गुलाब कम्बलमा खस्छन्, छवि जुन आज गुवादालुपको भर्जिनको रूपमा चिनिन्छ प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ।
आज, सान्ता मारिया डे गुआडालुपको बासिलिका विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको धार्मिक मन्दिर भएको छ।
को एक अनुमानित बीस मिलियन parishioners तिनीहरू हरेक वर्ष आफ्नो विश्वास दाबी गर्न र यस चमत्कारी भर्जिनलाई श्रद्धांजलि दिन आउँदछन्।
सुरक्षाको लागि ग्वाडलूपीको भर्जिनको प्रार्थना
धन्य गुवादालुपको भर्जिन, भगवानकी आमा, लेडी र हाम्रो आमा। यहाँ आउनुहोस् तपाईंको पवित्र छविको अघि प्रणाम गर्नुहोस्, जुन तपाईंले हामीलाई जुआन डिएगोको टिल्मामा मोहित पार्नुभयो, प्रेम, भलाइ र दयाको प्रतिज्ञाको रूपमा।
जुन शब्द तिमीले जुआनलाई अक्षम कोमलता संग भनेका थियौ त्यो अझै पनी सुनिन्छ: "मेरो प्यारो प्यारो छोरा, जुआन जसलाई म एक सानो र नाजुक एक को रूप मा माया गर्छु," जब, सुन्दरता संग उज्ज्वल, तपाइँ Tepeyac पहाड मा उनको आँखा सामु देखा पर्नुभयो। हामीलाई हाम्रो आत्मा मा गहिरो उही शब्दहरु सुन्न लायक बनाउनुहोस्।
हो, तपाईं हाम्रो आमा हुनुहुन्छ; भगवानकी आमा हाम्रो आमा हुनुहुन्छ, सबैभन्दा कोमल, सबैभन्दा दयालु।
र हाम्रो आमा हुन र हामीलाई तपाईंको सुरक्षाको आवरणमा आश्रय दिन, तपाईं आफ्नो ग्वाडालुपेको छविमा रहनुभयो। ग्वाडलूपको सबैभन्दा पवित्र भर्जिन, तपाईं हाम्रो आमा हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुहोस्।
हामीलाई प्रलोभनहरूको रक्षा गर्नुहोस्, शोकमा सान्त्वना दिनुहोस्, र हाम्रा सबै आवश्यकताहरूमा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्।
खतराहरूमा, बिमारीहरूमा, सतावटहरूमा, तीतोपनामा, परित्यागहरूमा, हाम्रो मृत्युको घडीमा, दयालु आँखाले हामीलाई हेर्नुहोस् र हामीबाट कहिल्यै अलग हुँदैन।
भर्जिन मरियम, एक राम्रो आमाको रूपमा, कसरी कडा सुरक्षा प्रदान गर्ने थाहा छ र ती सबैको लागी साँचो हो जसले उसलाई आमाको रूपमा मान्यता दिन्छ।
सुरक्षाको खोजीमा उनीसँग पुग्नु विश्वास, साहसी र इमान्दारिताको कार्य हो। हामी परिवारको सदस्य वा साथीका लागि हामीलाई आवश्यक परेको बेला सँधै सोध्न सक्दछौं।
त्यहाँ पनी ती हुन् जसले यो लागू गर्छन् प्रार्थना केही भौतिक चीजहरूको लागि, प्रार्थनाको यस पक्ष सतही देखिन्छ तर एक आमालाई थाहा छ कि कसरी आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्ने र उनीसँग सम्बन्धित सबै कुरा।
हामी उनकोमा जान सक्दैनौं उनले सोच्न सक्दिन उनले तर खुला मनले हामीसँग कुरा गर्न र हामीलाई केहि पनि गर्न को लागी मार्गदर्शन गर्न।
ग्वाडलूपको भर्जिनको लागि सुरक्षा अनुरोध गर्न प्रार्थना
ओह इम्माकुलेट भर्जिन, साँचो ईश्वरको आमा र चर्चकी आमा! तपाईं, जो यस ठाउँबाट तपाईंको करुणा र दया दर्शाउन सबै जो तपाईंको सुरक्षा अनुरोध गर्नुहुन्छ; सुन्नुहोस् कि प्रार्थनामा विश्वासको साथ हामीले तपाईंको छोरा येशू, जो हाम्रा एकमात्र उद्धारक हुनुहुन्छ सम्बोधन गर्दछौं र प्रस्तुत गर्दछौं।
कृपाकी आमा, लुकेको र मौन बलिदानको मालिक, तपाईंलाई, जो हामीलाई भेट्न बाहिर आउँदछन्, पापीहरू, हामी यस दिनलाई हाम्रो सबै अस्तित्व र हाम्रो सबै प्रेममा अभिवादन गर्दछौं।
हामी हाम्रो जीवन, हाम्रो काम, हाम्रो आनन्द, हाम्रो रोग र पीडालाई पनि पवित्र गर्दछौं।
शान्ति दिनुहोस्, न्याय र हाम्रो जनताको समृद्धि; हामीसँग सबै कुरा छ र हामी तपाईंको हेरचाह अन्तर्गत राख्छौं, महिला र आमा।
हामी पूर्ण रूपमा तपाईको हुन चाहान्छौं र तपाईंको चर्चमा येशू ख्रीष्टको लागि पूर्ण निष्ठाको बाटोमा हिंड्न चाहन्छौं: तपाईंको मायालु हातलाई नछोड्नुहोस्।
अमेरिकाको आमा, ग्वाडलूपीको भर्जिन, हामी तपाईंलाई सबै बिशपहरूको लागि आग्रह गर्दछौं, विश्वासीहरूलाई गहन ईसाई जीवनको मार्गमा डो lead्याउन, प्रेम र परमेश्वर र आत्माहरूको लागि नम्र सेवाको लागि।
यस विशाल फसलको बारेमा सोच्नुहोस्, र प्रभुका लागि सबै मानिसमा पवित्रताको लागि भोको जगाउन बिन्ती गर्नुहोस्, र पुजारीहरूको धार्मिक पेशा र धार्मिक, विश्वासमा बलियो, र ईश्वरीय रहस्यका रहस्यहरू फैलाउनेहरू प्रदान गर्नुहोस्।
संरक्षण, हेरचाह, माया, perdón र तपाईले त्यसलाई सोध्नु भएको सबै के, कानले उसको बच्चाहरूको आर्केसन सुन्न तयार छ।
विश्वास अपरिहार्य आवश्यकता हो।
परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले हामीलाई बुझाउँछन् कि हामीले त्यहाँ छ भनेर विश्वास गरेर सोध्नु पर्छ, त्यो हो, हामीले सुनेका छौं भन्ने कुरा जानेर हामीले प्रार्थनाहरू त्याग्नुपर्दछ, अझ बढी, उत्तर पनि छ।
Amparo एक आवश्यकता हो र कसैले सँधै यो सोध्नु पर्छ कि आवेग हृदयबाट महसुस गरियोस्।
हामीलाई भविष्य थाहा छैन र यसैले यो प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ यो हाम्रो हातमा छोड्नुपर्दछ हाम्रो योजनाहरू र हामीले लिनु हुने हरेक कदमहरू।
त्यसैले ग्वाडालुपेको कुमारी प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ।
उहाँको सुरक्षा हाम्रो जीवनमा सँधै रहोस् र उहाँको आशिष्‌ले हामीलाई र हाम्रो परिवार र साथीहरूलाई कहिल्यै त्याग्दैन।
विशेष व्यक्तिलाई सुरक्षाको लागि अनुरोध गर्नु प्रेमको काम हो, यस प्रार्थनाको लागि मैनबत्तीहरू जलाउनु वा अघिल्लो वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छैन जुन अलि सरल देखिन्छ तर वास्तवमा शक्तिशाली छ, तपाईंले विश्वास गर्नुपर्दछ, अरू केहि आवश्यक छैन।
चमत्कारको लागि सोध्न गुआडालूपीको कुमारी प्रार्थना
धन्य गुवादालुपको भर्जिन, आमा र हाम्रो देशको रानी। यहाँ तपाईं हामीलाई नम्रतापूर्वक आफ्नो विचित्र छवि को लागी प्रणाम गर्नुभयो।
(तपाईंको अर्डर राख्नुहोस्)
तपाईंमा हामी हाम्रो सबै आशा राख्छौं। तपाईं हाम्रो जीवन र आराम हुनुहुन्छ।
तपाईंको सुरक्षात्मक छायामुनि रहेको, र तपाईंको आमाको काखमा हुँदा हामी केहि पनि डराउँदैनौं।
हाम्रो पार्थिव तीर्थयात्रामा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् र तपाईंको दिव्य पुत्रको क्षणमा हाम्रो लागि मध्यस्थता गर्नुहोस् मृत्यु, ताकि हामी आत्माको अनन्त मुक्ति हासिल गर्न सक्छौं।
चमत्कारहरू ती चीजहरू हुन् जुन हामी विश्वास गर्दछौं कि मानव शक्तिको साथ प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ।
यो एक टर्म हो जुन रोगहरूको निवेदनमा अधिक प्रयोग गरिन्छ जुन चिकित्सा विज्ञानका अनुसार कुनै उपचार छैन।
यद्यपि, चमत्कार शब्द धेरै जसो परिस्थितिहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै त्यस्ता परिस्थितिहरूमा जहाँ हामी पैसा आउन असम्भव अवस्थामा पर्खिरहेका छौं वा जब परिवारको कुनै सदस्य हराइरहेको छ र एक पल देखि अर्को पल्ट सुरक्षित र सुन्न देखिन्छ।
चमत्कारहरू प्रार्थनाको दूरीमा छन् र केवल थोरै विश्वास मात्र भन्छन्। कुनै पनि कुरा असम्भव छैन।
के म सबै प्रार्थनाहरु भन्न सक्छु?
तपाईंले यो संतलाई सबै प्रार्थनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुपर्दछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि ग्वाडालुपेको भर्जिनको प्रार्थना धेरै विश्वासका साथ र उनको हृदयमा धेरै विश्वासका साथ प्रार्थना गरिएको छ।
तपाईं यस संतको सत्य शक्तिहरूमा विश्वास गर्न रुचाउनुहुन्छ र तपाईंले विश्वास गर्न आवश्यक छ कि उसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।